China 20 litre isikhwama sokuzijabulisa ebhokisini ifektri kanye nabaphakeli | Kaiguan
Ama-Cheertainers asetshenziselwa kangcono uketshezi olunamanzi nolubonakalayo.
Futhi ingasetshenziselwa izinto zokudla neziphuzo, ezinjengama-purees, amasoso, uviniga, ngenxa yamaJapane, ubisi, ijusi, iwayini, ubhiya, njll.
Ingafaka amakhemikhali, kufaka phakathi izinto zokunamathisela, ezolimo, okokuhlanza, uyinki, izinto zokugcoba, upende, ukumboza, uphethiloli, uketshezi lomanyolo, i-diluent, i-sanitizer, utshwala, i-hypochlorous acid disinfectant, i-diluent, i-gel ye-ultrasound, i-hematology reagent njll.
Izimonyo nezinto zokunakekelwa komuntu siqu, ezinjengokuhlanza, i-shampoo, insipho ewuketshezi, i-conditioner, ama-lotion asebenza kahle kakhulu ezikhwameni ezilingana nefomu.
Isitsha sisinda ngokwedlulele futhi kulula ukusiphatha.
Umkhiqizo uvikelekile ekukhanyeni nasemoyeni, okukuvumela ukuthi ugcine zonke izakhiwo zawo uze usetshenziswe ngokuphelele.
Idizayini yayo engenamthungo ivumela u-99% woketshezi ukuthi uthululwe.
Ukugeleza kokukhiphayo kujwayelekile futhi kuhlala njalo, kungabikho amabhamuza omoya noma ukucwebezela.
Isikhwama sihlala singanyakazi ngokuphelele ngaphakathi kwebhokisi, ngaleyo ndlela sivimbele ikepisi linganyakazi ngesikhathi sokuhamba.
Ukwehliswa okubonakalayo ekusetshenzisweni kwepulasitiki uma kuqhathaniswa neziqukathi eziqinile.
Ukwehliswa kwevolumu yokupakisha, kokubili lapho kungenalutho nalapho kugcwele.
Ukonga okubonakalayo esikhaleni kanye nezindleko zokuhamba kanye nezemvelo.
Ibhokisi le-Carton livumela indawo enkulu yokuxhumana ngemifanekiso.
Ukwesekwa kobuchwepheshe kanye nomklamo owenziwe ngezifiso.
I-Cheertainer akuyona isikhwama sakho esijwayelekile ebhokisini. Inikeza amakhasimende ukwakheka kwephakeji okudlula ukwakhiwa komcamelo ngokuhambisa nokusetshenziswa. Kuthuthukiswe ukwakha ukwakheka kwebhokisi, iChearanter enelungelo lobunikazi ihlukile ekwakhiweni kwayo nasekwakhiweni kwayo. Yenziwe ngama-gussets asemaceleni “angena kahle” esitsheni, iCheertainer ivumela ukukhishwa okuphelele okugeleza mahhala.
Ibhokisi lenzelwe ngokwezifiso. Njengoba yenziwe ngamakhadibhodi, zonke izinhlangothi zingaphrintwa, okunikeza indawo enkulu yokuxhumana nokukhangisa.
Inezinhlobonhlobo eziningi zokumisa, ukuvalwa kanye nama-valve.
Langaphambilini I-BPA Free Collapsible Water Container (eneSpigot)
Olandelayo: Isiqukathi Samanzi Esigoqekayo Samahhala (ngeSpigot)